Aadmi - Hoygamaansada
Buuraha ag joogsoo
Ilmo gabax ka siiyoo!
Cirka sare u eegoo
Arag felegga meeroo!
Aammus oo dhegeysoo
Shimbiraha la ooyoo.
Badda "aw"-da haysiyo
Waxa uurka ugu jira
Dhulka aad u baadhoo,
Dabaylaha af gara oo.
Urso oo jeclaysoo
Ku ilwaadso dooggoo.
U abtiri naflaydoo
Aabiga bilaashka ah,
Waa inaad illowdaa!
Awrka samada yaa yidhi,
Aadmigay u shidanyiin?
Ifkoon cidi ku uunnayn,
Miyaan Dirirku oognayn?
Kaa ayni weynayn?
Loo daaray awgaa?
Hadmaa felegga oosha ah
Amar buuxa lagu yidhi
Ku ekaw dadkoo qudha?
Haddaad eegga madhataan,
Amarkaagu waa been!
Waxaad uur wadaagtaan
Uur wada gasheenoo.
Ilma-adeer gudboon iyo
Isir baad tihiinoo;
Waa ul iyo diirkeed;
Waa sida indhaha oo
Kolkay midi ilmaysaa
Ta kaleeto ooydaa;
Looma uumin keligaa
Inay kuu adeegaan.
Ammuuraha badh baa sir ah;
Sida xaal u eg yahay
Ujeeddadu ka xeeldheer.
Aadmiyahaw hallaysani! Ambadyahaw wareersani! Maqal ereyadaydoo! Buuraha ag joogsoo Amakaag daraaddii, Ilmo gabax ka siiyoo! Cirka sare u eegoo Xiddiggaha astaysoo Arag felegga meeroo! Onkodkiyo hillaaciyo Ufadaa dhacaysiyo Uurada waraysoo. Ololkeeda Gooraan Aammus oo dhegeysoo Shimbiraha la ooyoo. Badda "aw"-da haysiyo Waxa uurka ugu jira Axadhoo garwaaqsoo. Dhulka aad u baadhoo, Webiyada ordaayiyo Daruuraha indheeyoo. Oogada jalleecoo Ciirada aroortiyo Dabaylaha af gara oo. Uduggooda kaymaha Urso oo jeclaysoo Ku ilwaadso dooggoo. U abtiri naflaydoo Ayaamaha tilmaansoo Aabiga bilaashka ah, Waa inaad illowdaa! Afaggaalayaashiyo Cadceeddeenna oloshiyo Awrka samada yaa yidhi, Aadmigay u shidanyiin? Ifkoon cidi ku uunnayn, Miyaan Dirirku oognayn? Ururradu miyaanay Kaa ayni weynayn? Ilayskooda goormaa Loo daaray awgaa? Hadmaa felegga oosha ah Amar buuxa lagu yidhi Ku ekaw dadkoo qudha? Haddaad eegga madhataan, Miyaanuu iftiimayn, Sidiisaa ahaanayn? Aadmiyahaw hallaysani! Amarkaagu waa been! Waxaad uur wadaagtaan Ugaadhaa wareegtoo Ugbaadkiyo caleentaad Uur wada gasheenoo. Uumiyaha dhammaantii Ilma-adeer gudboon iyo Isir baad tihiinoo; Noolahaad arkaysaa Waa ul iyo diirkeed; Waa sida indhaha oo Kolkay midi ilmaysaa Ta kaleeto ooydaa; Looma uumin keligaa Inay kuu adeegaan. Ammuuraha badh baa sir ah; Sida xaal u eg yahay Ujeeddadu ka xeeldheer.